Dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhan ah Al-shabaab oo ka socda J/Hoose iyo Gedo – Hornafrik Media Network
Kismaayo (Hornafrik) Ciidamada Xoogga Dalka ee ku sugan gobolada Jubada hoose iyo Gedo ayaa wado dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhan ah maleeshiyada Al-shabaab, kaas oo si gaar ah ugu wajahan gobolka Jubada dhexe.
Taliyaha qaybta 43-aad ee Xoogga Dalka Cali Maxamed Maxamuud (Bogmadow) ayaa warbaahinta Qaranka u sheegay in Taliska Xoogga Dalka ay ka go’antahay sida ugu dhaqsiyaha badan inay maleeshiyada Al-shabaab ka saaraan gobolka Jubada dhexe oo kooxdu ay sanado dhibaato ku haystay.
Dhinaca kale duqaymo lagu wiiqayo kooxda Al-shabaab ayaa dhawrkii maalmood ee la soo dhaafay ka dhacay gobolka Jubada dhexe, kaas oo lagu dilay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan Kooxda oo kuwa Ajnabi ah ay ku jiraan.
Ciidamada Xoogga Dalka oo kaashanaya Saaxiibada Caalamka ayaa howlgallo kawado Gobolada Dalka kaas oo laga gaaray guulo badan, waxaana laga dareemayaa deegaanada Kooxda argagixisada ku harsanyhiin kala carar iyo dagaallo dhexdooda ah, kadib shaki soo dhaxgalay iyagoo cabsi ka qabo Gulufka Xoogga Dalka ee ka dhanka ah Kooxda.
Antonio Guterres oo aqbalay go’aankii Dowladda Federaalka, Wakiil cusubna u soo magacaabaya Soomaaliya